Mallasaa Dirribsaa, Yaasiin Jumaa fi kaanis wabiidhaan akka bahan murtaa’e – Kichuu
Sagantaan Raadiyoo keenya har’aa akka lakkoofsa biyyaatti sa’aa 2:50 irraa eegalee dhimmoota kana qabatee dhiyaata.
Sagantaan keenya eegaleera
Mana Murtii Federaalaa Sadarkaa Jalqabaa dhaddachi ramaddii Araadaa gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaa fi gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Jumaa dabalatee namootni galmee Ciibsaa Abdulkarim jalatti himataman shan mirgi wabii eeggameefi akka gadhiifaman ajaje.
(bbcafaanoromoo)—Abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo, maamiltootni isaanii yakka dalaguu isaaniif ragaan dhiyaate waan hin jirreef galmeen isaanii cufamuu fi wabii qarshii 3,000n akka gadhiifaman murtaa’uusaa BBC’ti himan.
Galmee Obbo Ciibsaa Abdulkariim namoota shan of keessaa kan qabu yemmuu ta’u, gaazexeessaa OMN kan ta’e Mallasaa Dirribsaa, Hasan Jimaa, Fayyisaa fi Yaasin Jumaa keessatti argamu.
Gaazexeessaan lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa waggaa tokkoo oliif Itoophiyaa keessatti dalagaa akka ture maatiin BBC’tti himanii turan.
Namootni kunneen ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaan walqabatee reeffa ugguranii deebisuu, sabaaf sablammoota walitti buusuu fi walitti bu’iinsa amantaa uumun shakkamanii turan.
“Manni murtii ‘galmee erga qoranneen booda jara kana walitti qabaan kaasuu malee yakka dalaguu isaanii wanta mirkaneessu gahaan wanti poolisiin irra hin jirreef wabiidhaan yaa bahan’ jedheera jechuun Obbo Kadir BBCtiti himaniiru.
Haaluma walfakkaatuunis, galmee Obbo Jombaa Huseen keessatti kan argaman Ibraahim Abduljaliil, Kiyaar, Mahaammad, Obsaa fi Alamaayyoo jedhaman immoo wabii qarshii 4,000’n akka gadi lakkifaman murtaa’uusaa abukaatoon isaanii Obbo Kadir himaniiru.
Dhimma kana booda ta’u yeroo himanis “seerri kan jedhu erga manni murtii mirga wabii isaanii eegetti poolisiin halduree tokko malee ga dhiisuu qaba” jedhan.
“Maatiin namoota mirgi wabii eeggameef maallaqa qabsiisuf oli gadi fiigaa jiru. Sana booda ajaja kana qabatanii poolisiif dhiyeessu.
Poolisiinis ajaja mana murtii kabajee jara kana gadhiisuu qaba” jechuun dubbatan.